Imiqathango ngokubanzi Sale - Rikoooo
Imiqathango ngokubanzi Ukuthengiswa Rikoooo.com
Le website www.Rikoooo.com ke yipropathi self-ikontraka Bender Erik (emva koku ekubhekiswa kulo Rikoooo), zikhundla obhalisiweyo apha 107 Chemin kwizibuko de izibuko, 31410 noNoé, ezibhaliswe uRhwebo Companies Register phantsi kwinani Siret 50970657800010 ifoni. 05 61 97 39 54. Injongo yezi leMimiselo Jikelele nemiqathango yentengiso kukuchaza imigaqo nemiqathango kunye neemeko apho kwiintengiso phakathi Rikoooo nabathengi olugqityiweyo kule website. Uvavanyio icon eyenza umthengi bazane baze babambelele iimeko akhoyo jikelele intengiso kuya imvume ayinakuguqulwa yaye olucacileyo inxalenye yakhe yonke imimiselo equlethwe iimeko jikelele sentengiso.
Inqaku 1 - Injongo kunye nesiqulatho
1.1- Ezimeko jikelele yentengiso kukoyisa naluphi na olunye uxwebhu lomthengi, yaye ngokukodwa naziphi na iimeko jikelele yentengo, ngaphandle kokuba express kunye nesivumelwano phambi ethoba nkampani.
1.2 - Ezimeko jikelele yentengiso isicelo zonke ukuthengiswa kweemveliso by yenkampani yethu kwiwebhusayithi yayo ngaphandle kokuba isivumelwano ezithile phambi umyalelo ekuvunyelwene ngokubhala phakathi kwamaqela.
1.3 - Nayiphi na enye uxwebhu kunale meko jikelele yentengiso kunye kwiikhathalogu ingakumbi, basenokuba ngabafundi, izibhengezo, izaziso, ingumqondiso kuphela, non-yemvumelwano. Iifoto kunye nemizobo thaca kwi-website kubonisa kuphela yaye abenzi luxanduva nomthengisi.
2 Inqaku - Yengqondo
Zonke iitekisi, izimvo, imifanekiso kunye nemifanekiso uvuselelwe kwisiza www.Rikoooo.com bucala kwaye kwipropati kuphela Rikoooo okanye abaxhobisi zayo kwaye zikhuselwe phantsi copyright nepropati nezengqondo ukulungiselela lonke ihlabathi Ke ayile, imifuziselo, amalungelo awodwa, izicwangciso kunye ngokubanzi onke amaxwebhu naluphi na uhlobo okanye zithunyelwe Rikoooo ukuya ngumthengi ziyipropathi kuphela Rikoooo okanye abaphathi bayo.
3 Inqaku - Orders
3.1 - ethengiswayo ngenxa nokuthengiswa Rikoooo abo thaca kwi www.Rikoooo.com kunye neempawu zakhe kubalulekile zichazwe apha. Ngokungqinelana neSiqendu L. 111-1 yeKhowudi Consumer, nto leyo icacisa ukuba "wonke umsebenzi othengisa iimpahla okanye iinkonzo ziya, phambi kokugqitywa isivumelwano, beka ngumsebenzisi ayazi iimpawu ezibalulekileyo iimpahla okanye iinkonzo ", le nkampani Rikoooo ivumela umthengi, phambi kokuba naluphi ukufakwa umyalelo, afune ulwazi olongezelelweyo kwezi mveliso ngefowuni okanye nge email, amanani avela kwimbulambethe ezi meko jikelele sentengiso.
Rikoooo uthembisa ukunika abathengi kunye naluphi ulwazi olongezelelweyo ukuze unqwenela ukufumana ukuba engaqondelanga ngokwakhe ngokwaneleyo kwaziswa yi-inkcazelo kunye neempawu iimveliso ezithengiswa kwisiza zikhankanywe ngasentla.
Noko ke, luxanduva lomthengi ukuqinisekisa ukuba iimveliso yayalela bahambelana neemfuno zakhe yaye kuyo, ukuba kuphela onoxanduva siyahambelana na imveliso ukusetyenziswa ngenxa yona ngumthengi.
3.2 - iinkqubo ushicilelo oluzenzekelayo zithathwa ubungqina uhlobo, umxholo kunye nomhla umyalelo. Rikoooo siqinisekisa ukwamkeleka umyalelo wayo umthengi kule dilesi ye-imeyili ukuba ziya kwaziswa. Intengiso iya kuphela kugqitywa emva kokuqinisekisa komyalelo.
Rikoooo ugcina ilungelo lokurhoxisa nasiphina umyalelo evela njengomxhasi lowo kukho imbambano emalunga nokuhlawulwa komyalelo yangaphambili. Ulwazi yathi ngumthengi, xa uthatha umyalelo, sibophelela abathengi: xa imposiso yomamkeli iinkcukacha idilesi, othengisayo akanakubekwa uxanduva nakwenzeka lokuhambisa imveliso.
3.3 - Rikoooo linelungelo ukwenza naluphi na utshintsho okanye ukuphuculwa ukuba ibona kuyimfuneko nangaliphi na ixesha imveliso yawo, ngaphandle sigwetyelwe ngumthengi, ukwala ukwamkeleka kwaye unelungelo Ngexesha kokucima omnye iimveliso ebonakala website layo, oku kongezwe ayikwazi kuyo nayiphi na imeko kugwebela phezu inxalenye umthengi, ezinye umonakalo ukuba. Ukuba imveliso babeza zingacinywa umthengi akathandanga ukhethe enye imveliso nqwa okanye ezifanayo, umyalelo wakhe bezirhoxiswa uyakurhoxiswa jure kwaye iintlawulo ezenziwe kuba ubuyiselwe.
neminikelo imveliso Rikoooo ukuba ziyafumaneka ngaphakathi komda kwezitokhwe ezikhoyo kunye neemveliso ayigcinwanga phakathi kwizakhiwo Rikoooo yakhe, kuxhomekeke kubukho zabaxhasi balo, ezingaphaya kolawulo Rikoooo. Kwimeko apho angekhoyo iimveliso emva ngokubeka umyalelo, Rikoooo uthembisa ukwazisa ngumthengi ngokukhawuleza, ngeposi, Internet okanye i-imeyile. Umthengi unako kucima umyalelo wakhe Rikoooo uya abuyisele kuye, ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, nasiphi na isixa ukuba ndiyibize ukusuka umthengi.
Nayiphi ukungafumaneki iimveliso, nokuba kungasiphi na isizathu, ngaba akukho tyala zibangela ukuba kubuzwe lo intlawulo Rikoooo abanye umonakalo nomdla okanye ezinye iindleko zalo naluphi na uhlobo.
4 Inqaku - Ukuhanjiswa
Kokunikezelwa asethi ezingaphathekiyo senziwa kwangoko emva Ukwamkeleka intlawulo.
Inqaku 5 - Price
Amaxabiso yintengiso iimveliso ezimileyo yi Iwerhafu ukusebenza ngomhla Ukuxhonywa umyalelo. Rikoooo balibambile ekunene ukuyiguqula amaxabiso ayo nangaliphi na ixesha xa utshintshwe kwamaxabiso, amaxabiso esebenzayo iya kuba abo ukusebenza ngomhla nangokwamkela umyalelo.
Amaxabiso kunye namaxabiso ezidweliswe www.rikoooo.com acatshuliwe euro kwaye iquka i-VAT. Ke umnatha nasiphi na isaphulelo kwaye ngaphandle nokuhanjiswa okanye ukuthunyelwa iindleko.
Inqaku 6 - Intlawulo
6.1 - Intlawulo
Intlawulo iimveliso ngokomthetho-www.rikoooo.com site lwenziwa imali ukuze yi Paypal okanye 2Checkout (CB) okanye Jonga.
6.2 - Non-intlawulo / Ugcino igatya isihloko
Ngesiganeko intlawulo iza angagunyazisa Rikoooo kwakujingiswa ukwenziwa yonke imiyalelo ababalaseleyo lomthengi, ngaphandle yamva nako ibango nawuphi na umonakalo okanye indemnities naluphi na uhlobo. Ukongeza, umthengi uya kubabuyisela Rikoooo zonke iindleko ezenziweyo kwakhona izibalo engekahlawulwa, kuquka njengesambuku yokhuselo 10% ye zibalo ngenxa, kungagatywanga nawuphi na umonakalo kunye nenzala.
Xa iimveliso ezithengiswa bengahlawulwa ngokupheleleyo ngexesha lokusiwa, Rikoooo leeViwo ipropati ide intlawulo epheleleyo ixabiso inqununu kunye izincedisi ezihambelana, intlawulo ngaphakathi intsingiselo kweli gatya ziqondeke, Price lokuqokelela Rikoooo. Kwimeko leentsuku 8 engagqibekanga emva ileta yesaziso esesikweni wathumela ngeleta ebhalisiweyo kunye yokuvuma ukuba uyifumene kunye asiphumelelanga, intengiso iya mayiyekwe ilungelo ukuba okulungileyo emehlweni Rikoooo kungagatywanga nawuphi na umonakalo kunye nenzala.
Inqaku 7 - Guarantee ye ziphene nefihlakeleyo
Rikoooo uqinisekisa ukuba iimveliso zayo ukuthobela imimiselo isiFrentshi kwaye yaseYurophu sisebenza ngabo, njengokuba zikhona.
8 Inqaku - ulwazi oyintloko
Rikoooo uthembisa ukuba ukunxibelelana amaqurhu ulwazi ezosulela kuyo ngumxhasi, leyo luyimfihlo. Le ngcaciso iya kusetyenziselwa kuphela iinkonzo zangaphakathi Rikoooo ukwenza umyalelo umthengi lowo. Ngokungqinelana woKhuseleko Data Act of 6 January 1978, umthengi unelungelo lokufikelela, lungiswa kunye inkcaso idata yobuqu ngaye. Ukwenza oku, kwanele apply online okanye ngeposi, ngokukhankanya igama, igama, idilesi kunye, ukuba kunokwenzeka, ireferensi abathengi.
9 Inqaku - Force kancinci
Rikoooo ukuze sinokukhululeka yonke okanye inxalenye izibophelelo zayo ngaphandle kokuba nako ibango nawuphi na umonakalo kuyo xa kuthe iimeko esingakhange okanye amandla kancinci ekuthinteleni okanye abakhawulezi ipoti ye iimveliso okanye ezinye izinto zabo.
Ukuba isiganeko eso sithatha ngaphezulu kweentsuku ezingamashumi amathathu ukususela kumhla wokwenzeka kwaso, isivumelwano sentengiso waqukumbela inkampani yethu bathengi buyakupheliswa inxalenye yayo eyona sabakhutheleyo, ngaphandle nawaphi na amaqela Ngaba ibango umonakalo. Le Urhoxiso ukusebenza ngomhla ntetho yokuqala leta abhaliswe AR agxeke isivumelwano wathi yokuthengisa.
10 Inqaku - Native
Ngesivumelwano esikhawulezayo phakathi kwamaqela, iNkundla Commercial kwikomkhulu yethu iya kuba siso nasiphi na iimbambano okanye naziphi na iinkqubo ezinento yokwenza ukusekwa, ukuthimab okanye intsingiselo yezi meko jikelele yentengiso kwaye yonke imisebenzi Ukuthengiswa iimveliso Rikoooo. Ezi meko jikelele yentengiso kunye nazo zonke iintengiso ezenziwe Rikoooo zixhomekeke komthetho waseFransi.
11 Inqaku - zibiwe
Inyaniso yokuba inkampani yethu ayiwenzi, nangaliphi na ixesha, linike naliphi na amagatya lwale nto, akanako ukuzirhoxisa ilungelo ukuthembela ezi amagatya ngomhla oya kulandela kamva.